१ महिना नबित्दै अशोक दर्जीको घर बारे यति ठुलो खुलासा, भाईबहिनिले स्कुल छोडे ! यस्तो छ कारण (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > १ महिना नबित्दै अशोक दर्जीको घर बारे यति ठुलो खुलासा, भाईबहिनिले स्कुल छोडे ! यस्तो छ कारण (भिडियो)
सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल भइरहेको गीत छ, मन बिनाको धन ठूलो कि, धन बिनाको मन । यी शब्द सबैलाई तान्ने खालको त छन् नै यस गीतका गायक अशोक दर्जीका कारण पनि यो गीत भाइरल बनिरहेको हो।झापाको सडकहरूमा गाउने अशोक दर्जी अहिले स्टार बनिरहेका छन्। अशोक दर्जीको अहिले घर निर्माण कार्य सकिएर अहिले उनको घर हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि सकिएको छ ।
अशोक दर्जी अहिले काठमाडौँमा छन् । आफ्नो घर हस्तान्तरण कार्यक्रम सके लगतै अशोक काठमाडौँ आए तर घरको नंया खुला भएको छ भने अशोकको भाईबहिनिले स्कुल छोडेका छन् ! यस बाट अब के होला भने प्रश्न उबजिएको छ । १ महिना नबित्दै अशोक दर्जीको घर बारे यति ठुलो खुलासा, भाईबहिनिले स्कुल छोडे हेर्नुहोस भिडियो